हाेसियार ! तपाईंकाे इमेल अरुले पनि पढिरहेका हुनसक्छन् ! - Birgunj Sanjalहाेसियार ! तपाईंकाे इमेल अरुले पनि पढिरहेका हुनसक्छन् ! - Birgunj Sanjalहाेसियार ! तपाईंकाे इमेल अरुले पनि पढिरहेका हुनसक्छन् ! - Birgunj Sanjal
हाेसियार ! तपाईंकाे इमेल अरुले पनि पढिरहेका हुनसक्छन् !
३ पुष २०७६, बिहीबार ०५:३०
एजेन्सी– सूचना प्रविधिकाे विकाससँगै हामी यसबाट टाढा रहन सक्दैनाैँ । पछिल्लाे समय हाम्रा हरेकजसाे काममा इमेल पनि प्रयाेगमा आइरहेकाे छ । हामीले एकअर्कालाई पठाउने इमेल नीजि विषयमा पनि हुनसक्छन् ।
कयाैँ महत्वपूर्ण र कन्फिडेन्सियल कुराहरु पनि हामीले इमेलमा पठाइरहेका हुन्छाैँ । किनकि हामीलाई थाहा छ- हामीले पठाउने इमेल जसलाई पठाएका हाैँ, उसले मात्र पाउँछ । तर, वास्तवमा त्यस्ताे हाेइन ।
हाम्रा जरुरी इमेल अरु कसैले पनि पढिरहेकाे हुनसक्छ । पछिल्लाे समय हामीले जिमेल बढी प्रयाेग गरिरहेका हुनसक्छाैँ । त्यही जिमेल प्रदान गरेकाे कम्पनी गुगलले यसकाे पुष्टि गरेकाे छ कि हामीले एकअर्कालाई पठाएका इमेल अरु कसैले पढिरहेका हुनसक्छन् ।
गुगलका अनुसार हामीले पठाएका इमेललाई थर्ड पार्टी एपहरुका डेभलपरहरुले पढिरहेका हुनसक्छन् । हामीमध्ये जसले थर्ड पार्टी एप्सहरुलाई हाम्राे इमेलमा समावेश गरेका छाैं, ती इमेल त पक्कै पनि अरुले पनि पढेका छन् । एक कम्पनीले वाल स्ट्रिट जर्नललाई बताएका अनुसार याे सामन्य कुरा पनि धेरैलाई थाहा नभएकाे हुनसक्छ ।
तर, विश्वका प्रविधि विशेषज्ञहरुले गुगलले पनि यस्ताे गरेकाेमा अापत्ति जनाएका छन् । अहिले जिमेल विश्वभर १.४ अर्ब भन्दा धेरै मानिसले प्रयाेग गर्छन् ।